Ny Samsung Galaxy Note 10 dia nandalo Geekbench | Androidsis
Ny Samsung Galaxy Note 10 dia mandalo an'i Geekbench ary mampiharihary ny sasany amin'ireo endriny
Tamin'ny volana Aogositra tamin'ity taona ity ny Samsung Galaxy Note 10 hapetraka, raha ny tsiliantsofina sy ny fizotry ny fotoana tsy maintsy hajain'ny terminal, izay ho tonga handimby ny Galaxy Note 9, ny finday izay natomboka tamin'ny volana voalaza tamin'ny taon-dasa.
Ity fitaovana ity dia ho fitaovana avo lenta feno ary tsy hisy hialona ny Galaxy S10fa ny mifanohitra amin'izay. Ary, alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy, nipoitra tao amin'ny mariky ny Geekbench. Ao, ny antsipiriany sasany niniana namboarina momba azy dia naseho sy voamarina, toy ny RAM sy ilay mpanodina. Andao hojerentsika izay nomanin'ny smartphone ho antsika manaraka!
Ireo nomeraon-modely nanoratana an'ity finday ity ao amin'ny tahiry Geekbench dia "SM-N976B" sy "SM-N976V". Samy ao amin'ity haitao avo ity, hono, afaka manana hevitra marina kokoa momba izay omanin'i Samsung ho antsika isika.
Ny SM-N976V dia voalaza fa ny Galaxy Note 10 5G an'ny Verizon ary misy fitaovana Snapdragon 855 avy amin'ny Qualcomm. Ny SoC dia voatonona anarana anarana "msmnile" ao anaty lisitra ary ampiarahina amin'ny a RAM 12GB, arak'io. Ho setrin'izany, miaraka ny smartphone Android 9 Pie ary tamin'ny andrana tokana dia nahazo isa 3,529, raha ny fitsapana marobe kosa nahatratra 10,840 XNUMX.
Samsung dia manana ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha 100 watt azy izay afaka manomboka amin'ny Galaxy Note 10
Ny SM-N976B ihany koa no tsy mitovy amin'ny Galaxy Note 10 5G natokana ho an'ny mpitondrana Boost Mobile any Etazonia. Exynos 9825 an'ny orinasa ary manana RAM 8 GB. Tahaka ilay maodely efa voalaza amin'ny antsipiriany, dia tonga miaraka amin'ny Android 9 Pie izy io, saingy nanoratra teboka 3,557 sy 9,654 tao amin'ny fanadinana Geekbench tokana sy multi-core tsirairay avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Samsung Galaxy Note 10 dia mandalo an'i Geekbench ary mampiharihary ny sasany amin'ireo endriny
Ny vaovao izay entin'ny iOS 13 izay nankafizinay efa ela tao amin'ny Android
Ahoana ny fomba hampanginana ny tantara Facebook avy amin'ireo olona ifandraisanao